ICC မှ Fatou Bensouda ကိုဆက်ခံခြင်း - ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ကြိုးစားနေကြရသည် - Jeune Afrique - teles relay
ICC မှ Fatou Bensouda ကိုဆက်ခံခြင်း - ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်ရုန်းကန်နေရသည် - Jeune Afrique
By Tele RELAY တစ်ခု On သြဂုတ်လ 1, 2020
Showbiz - ပြင်သစ်တွင်ဖျားနာ။ အရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းရခြင်း၊
Noso ရှိလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းတ ဦး အပေါ်ရာဇဝတ်မှု၊
ကင်မရွန်း - ပေါလ်ဘီယာသည်ကျယ်ပြန့်သောလှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ခံသည်။
Fatou Bensouda၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်တရားရုံး၏အစိုးရရှေ့နေ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်© JA for Wiebe Kiestra
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုတရားရုံး၏တရား ၀ င်ရာထူးအတွက်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလေး ဦး သည်စစ်မှန်သောအလုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တစ်မူထူးသောအတွေ့အကြုံ။
အစိုးရရှေ့နေကိုမြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ခင်ဗျားထင်သလား။ "မင်းကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်မင်းအကျိုးစီးပွားပconflictsိပက္ခဖြစ်မလား?" ရုံးကကိုင်တွယ်သောအမှုများကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်မည်သည့်စံနှုန်းများကိုလမ်းညွှန်သင့်သနည်း? ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နှင့် ၃၀ ရက်များတွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရာဇ ၀ တ်မှုတရားရုံး၏အစိုးရရှေ့နေ Fatou Bensouda အားဆက်ခံရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းလေး ဦး ကိုခန့်အပ်ခဲ့သည်။
၆ နာရီကျော်မျှကြာသောသူတို့သည်ပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှကိုယ်စားလှယ်များထံမှမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခဲ့သည်။ လူအများအပြားနှင့်ပြုလုပ်သောစစ်မှန်သောအလုပ်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းကိုပြည်သူလူထုအတွက်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်၌ကျင်းပခဲ့သည့်တပ်မက်မှုနှင့်အလွန်နိုင်ငံရေးနှစ်ခုစလုံးအတွက်နေရာတစ်ခုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကျွမ်းကျင်သူလေး ဦး ပါသောကော်မတီမှကြိုတင်ရွေးချယ်ထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကို Morris Anyah (ယူအက်စ်အေ - နိုင်ဂျီးရီးယား)၊ Susan Okalany (ယူဂန်ဒါ)၊ Fergal Gaynor (အိုင်ယာလန်) နှင့် Richard Roy (ကနေဒါ) ကိုရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ခြင်း ပါ ၀ င်နိုင်ငံများအဖွဲ့ ၀ င်များ၏အဖွဲ့ ၀ င်များနှင့်သိကျွမ်းလာရန်။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်နောင်လာမည့်ဒီဇင်ဘာလမတိုင်မီတရားရုံး၏ရှေ့နေချုပ်အားခန့်အပ်ရန်သဘောတူညီမှုရရန်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိသည်။
Tele RELAY တစ်ခု 17000 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
WTO - ယာယီဒါရိုက်တာချုပ် Jeune Afrique အားခန့်အပ်ရန်သဘောတူညီမှုမရှိပါ
ကျွန်စနစ် - Timothée de Fombelle:“ သတ္တဝါတိုင်းသည်သူ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျက်စီးသွားကြသည်။ "- လူငယ်အာဖရိက
ကင်မရွန်း - Paul Biya သည်တရားစီရင်ရေးအတွင်းမှလှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်ခံသည် - လူငယ်…
Laurence Boccolini သည် TF1 မှထွက်ခွာမည်!